မည်သို့ WI-FI ကွန်ရက်ဖုံးကွယ်ပြီးဝှက်ထားသောကွန်ယက်ကိုချိတ်ဆက်ရန် - အရင်ကဆိုရင်များအတွက် - 2019
သငျသညျအများအားဖြင့်ရရှိနိုင်သည့်ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်များစာရင်းပေါ်, Wi-Fi ကွန်ရက် ချိတ်ဆက်. အခါ, သငျသညျအဘယ်သူ၏ router များအနီးအနားမှာဖြစ်ကြောင်းအခြားလူများရဲ့ကွန်ရက်အမည်များ (SSID သို့) ၏စာရင်းတစ်ခုတွေ့နိုင်ပါသည်။ သူတို့က, အလှည့်တွင်, သင့်ကွန်ယက်၏နာမကိုကြည့်ပါ။ ဆန္ဒရှိလျှင်, သင် Wi-Fi ကွန်ရက်ဖုံးကွယ်နိုင်သည်သို့မဟုတ် ပို. တိကျစွာ, SSID သို့၎င်း၏အိမ်နီးချင်းများကိုတွေ့မြင်ကြဘူးဒါကြောင့်, သင်သည်သူတို့၏ကိရိယာနှင့်အတူတစ်ဦးက hidden ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။
ဒီညွှန်ကြားချက်တွင် - ဘယ်လို router ကို ASUS ကအပေါ်ကို Wi-Fi ကွန်ရက်ဖျောက်ရန်, D-Link, TP-Link နဲ့ Zyxel နဲ့ Windows 10 ထဲမှာ ချိတ်ဆက်. - က Windows 7, Android, iOS နှင့် MacOS ။ Windows တွင်ဆက်သွယ်မှုများ၏စာရင်းထဲကနေအခြားတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ Wi-Fi ကွန်ယက်ဖုံးကွယ်ဖို့ဘယ်လို :. ကိုလည်းရှုပါ။
နောက်ပိုင်းတွင်သင်ခန်းစာအတွက်ငါသည်သင်ပြီးသား Wi-Fi ကို router ကိုနှင့်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုလည်ပတ်နေသည်ကြနှင့်သင်ပြုလုပ် ချိတ်ဆက်. စာရင်းထဲကကွန်ယက်အမည်အားကို select နှင့် password ကိုရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်ယူဆပါလိမ့်မယ်။
Wi-Fi ကွန်ရက် (SSID သို့) ဖုံးကွယ်ထားရန်လိုအပ်သောပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကို router setting များကိုတံခါးဝဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်ကိုယ်တိုင်သင့်ရဲ့ကြိုးမဲ့ router ကိုထူထောင်ကြောင်းပေး, ခက်ခဲသည်မဟုတ်။ မဖြစ်လျှင်, အချို့ကိုသင်တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနှင့်အတူကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဆိုကိစ္စတွင်ခုနှစ်, Router ကို configuration များအတွက်စံနှုန်း entry ကိုလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
Wi-Fi သို့မဟုတ် cable ကိုမှတဆင့် router ကိုချိတ်ဆက်တဲ့ Device ကိုတွင် Router က interface ကို setting များကိုများ၏ဘရောက်ဇာကို web လိပ်စာ၏လိပ်စာဘားတန်းအတွက်တစ်ဦးကို web browser နဲ့ type ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ အများအားဖြင့်က 192.168.0.1 သို့မဟုတ် 192.168.1.1 ဖြစ်ပါတယ်။ လိပ်စာ, username နှင့် password များအပါအဝင် login အသေးစိတ်ကို, များသောအားဖြင့် Router ကို၏အောက်ဆုံးသို့မဟုတ်နောက်ကျောမှာတည်ရှိပါတယ်တံဆိပ်ပေါ်တွင်ညွှန်ပြ။
သင်တစ်ဦးရဲ့ login နဲ့ password စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, စံ user name နဲ့ password ကို - admin ရဲ့ နှင့် admin ရဲ့ နှင့်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း, တံဆိပ်အပေါ်သတ်မှတ်ထားသောနေကြသည်။ စကားဝှက်ကိုမသင့်တော်သည်ဆိုပါက - ချက်ချင်းတတိယအပိုဒ်ပြီးနောက်ရှင်းပြချက်ကိုတွေ့မြင် ..
သင် router ကို setting များကိုသို့ logged ကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်, သင်ကဝှက်ထားသောကွန်ယက်ပေါ်ရွှေ့နိုင်ပါတယ်။
သင်ယခင်က Router ကိုကို set up (သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုပြု၏) မြင့်မားဖြစ်နိုင်ခြေကို default password ကို admin ရဲ့အတူကြလျှင် (သင်ပထမဦးဆုံး Router က interface ကို Setting ထဲကို log သည့်အခါများသောအားဖြင့်ကို default password ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်တောင်းဆိုကြသည်) အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေ။ ဤကိစ္စတွင်အချို့ router များ, သငျသညျတခုမမှန်ကန်ကြောင်း password ကိုအကြောင်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်, အချို့အခြားသူတွေအတွက်က settings စာမျက်နှာကနေ "ထွက်ခွာ" သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းတဲ့အဆင့်မြှင့်နှင့်တစ်ဦးအလွတ် input ကိုပုံစံပေါ်ပေါက်ရေးတူပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျ login မှစကားဝှက်ကိုသိလျှင် - အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့။ သငျသညျ (ဥပမာ, Router ကိုတစ်စုံတစ်ဦးတို့ကထူထောင်သည်) မသိလျှင် - ထိုဆက်တင်များသို့သွားတစ်ခုသာစံ password ကိုအတူသွားကြဖို့, စက်ရုံတွင် settings ကိုမှ Router ကို reset ပါလိမ့်မယ်။
သင်ဤလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိနေကြသည်ဆိုပါကများသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့် Router ကို၏နောက်ဘက်ခြမ်းတွင်တည်ရှိပြီးသော Reset ချကိုင်ပြီးအားဖြင့် (15-30 စက္ကန့်) ရှည်ခြင်းဖြင့် reset ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းသို့ပြောင်းလဲပြီး, သင်ကဝှက်ထားသောကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုဖြစ်စေလျက်, ဒါပေမယ့်လည်း ISP က Router ကမှ re-configure ဆက်သွယ်မှုမှသာမဟုတ်ဘဲရှိပါလိမ့်မယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်ဤ site ပေါ်တွင် router ကို Configuring အတွက်လိုအပ်သောညွှန်ကြားချက်များတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
မှတ်ချက်: Wi-Fi ကိုကျော်ချိတ်ဆက်ဖြစ်ကြောင်း device များအတွက်တစ်ဦးက hidden SSID သို့ချိတ်ဆက်မှုကိုကျိုးပဲ့ပျက်စီးသွားမည်ဖြစ်ပြီးသင်နှင့်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကို re-ချိတ်ဆက်ဖို့လိုအပ်အတူပြီးသားဝှက်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက် - အောက်တွင်ဖော်ပြမည့်ခြေလှမ်းများထွက်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်သည့် Router က settings စာမျက်နှာ၌လယ်ပြင် SSID သို့ (ကွန်ရက်အမည်) ၏တန်ဖိုးကိုသတိရသို့မဟုတ်ရေးချရန်သေချာစေပါ - ကဝှက်ထားသောကွန်ယက်ကိုချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်ပေသည်။
D-Link ကိုအပေါ်တစ်ဦးကို Wi-Fi ကွန်ရက်ဖုံးကွယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
အားလုံးဘုံ router များ D-Link ပေါ်တွင် SSID သို့ပုန်းအောင်း - DIR-300, DIR-320, DIR-615 နှင့်အခြား Firmware version ကိုပေါ် မူတည်. အဆိုပါ interface တွေကိုအနည်းငယ်ကွဲပြားကြသည်, ထိုအချက်ကိုရှိနေသော်လည်းနီးပါးအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
Router ကို Setting ကိုအတွက် logging ပြီးနောက်, Wi-Fi ကိုကိုသွား, ပြီးတော့ - အစောပိုင်းက firmware ကိုဗားရှင်းမှာတော့ "အခြေခံပညာ Settings" ကို (- တစ်ပင်အစောပိုင်းကအတွက်, "က Wi-Fi ကို" အောက်တွင် "အခြေခံက Settings" - သို့ဖြစ်လျှင်, အောက်ခြေမှာ "အဆင့်မြင့်က Settings" ကိုနှိပ်ပါ - ထို့နောက် "ကို manual setup ကို" နှင့်အခြေခံ wireless network ကို setting များကိုတွေ့ပါ) ။
"Access Point Hide ။ " Check
settings ကို save လုပ်ပါ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သည် "Edit ကို" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးနောက် D-Link ပေါ်တွင်သတိပြုပါပြောင်းလဲမှုများနောက်ဆုံးတော့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ကြသည်ဖြစ်စေခြင်းငှါ Settings စာမျက်နှာရဲ့ထိပ်ပိုင်းညာဖက်အခြမ်းမှာအကြောင်းကြားစာနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်, "Save" ကိုနှိပ်အပြင်လိုအပ်ပါသည်။
မှတ်ချက်: "Access Point Hide" နှင့်ခလုတ်ကိုနှိပ် "Edit ကို" ၏အဆင့် setting အခါ, သငျသညျကို Wi-Fi ကိုလက်ရှိကွန်ယက်မှအဆက်ပြတ်နိုင်ပါသည်။ ဒီဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်စာမကျြနှာ "ဖမ်း" ဖြစ်ပါတယ်လျှင်အဖြစ်, ထို့နောက်အမြင်အာရုံကကွညျ့ရှုနိုငျသညျ။ ဒါဟာကွန်ယက် re-ချိတ်ဆက်နှင့်နောက်ဆုံးတွင် settings ကိုကယ်ဖို့လိုအပ်ပေသည်။
TP-Link ကိုရန် SSID သို့ပုန်းအောင်း
routers များကို TP-Link ကိုတွင် WR740N, 741ND, TL-WR841N နှင့်အဲန်ဒီနှင့်ဆင်တူဝှက်ကို Wi-Fi ကွန်ရက် "ကြိုးမဲ့ Mode ကို" အော setting တွင်ရှိနိုင်ပါသည် - "ကြိုးမဲ့က Settings '' ။
အဆိုပါ SSID သို့လိုအပ်ပါသည်ဖုံးကွယ်ဖို့ "SSID သို့အသံလွှင့် Enable" နှင့် settings ကိုကယ်တင် uncheck လုပ်ပါ။ settings ကိုဖြစ်ကြသည်ကို Wi-Fi ကွန်ရက်က hidden ဖြစ်ပြီး, သငျသညျကနေ disconnect နိုင်တဲ့အခါ - တစ်ဦးကို browser window ထဲတွင်ကြောင့်ဆွဲထားခြင်းသို့မဟုတ်စာမျက်နှာ TP-Link ကို Web ကို Interface ကို load ဖို့မတူပေမည်။ ရုံပြီးသားဝှက်ထားသောကွန်ယက်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်။
, Wi-Fi ကွန်ရက် Router ကို ASUS က RT ကို-N12, RT ကို-N10, RT ကို-N11P နှင့်ဤထုတ်လုပ်သူများထံမှများစွာသောအခြားထုတ်ကုန်များအပေါ်ဝှက်ထားလျက်ရှိ၏အောင်လက်ဝဲ Menu ထဲမှာဆက်တင်များသို့သွား, select လုပ်နိုင်ရန်အတွက် "ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်။ "
ထို့နောက် "Yes" ကိုသတ်မှတ်ထား "ဟုအဆိုပါ SSID သို့ Hide" နှင့် settings ကိုကယ်တင်အောက်ရှိ "အထွေထွေ" tab ကိုအပေါ်။ သင် settings စာမျက်နှာကိုကယ်တင်ပါလျှင် "ဆွဲထား" သို့မဟုတ်မှားယွင်းမှုတစ်ခုနှင့်အတူတင်ဆောင်ရုံ re-ချိတ်ဆက်တစ်ဦးက hidden ကို Wi-Fi ကွန်ရက်ရှိသည်။
Router ကို Zyxel Keenetic Lite ကိုနှင့်အခြားသူများအပေါ် SSID သို့ဖုံးကွယ်ရန်အလို့ငှာခုနှစ်, settings စာမျက်နှာ၏အောက်ဆုံးမှာကြိုးမဲ့အိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ထို့နောက်သို့မဟုတ် "Disable လုပ်ထား SSID သို့အသံလွှင့်" "ဟာ SSID သို့ Hide" နှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါစစ်ဆေး "Apply ။ "
အဆိုပါဆက်တင်များကိုသိမ်းဆည်းပြီးနောက်ကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုချိုးမည် (ပင်အမည်တူနှင့်အတူဝှက်ထားသောကွန်ရက်တစ်ခုကြောင့် - ကအတော်လေးတူညီကွန်ယက်ကိုမဟုတ်ပါဘူး) နှင့် Wi-Fi ကွန်ရက်မှ re-ချိတ်ဆက်ရန်ရှိသည်ပြီးသားဝှက်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။
ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်မှတစ်ဦးကိုလြှို့ဝှကျကို Wi-Fi ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်း SSID သို့များ၏အတိအကျစာလုံးပေါင်းကိုသိရန်လိုအပ် (ကွန်ရက်အမည်, သငျသညျကွန်ယက်တစ်ခုက hidden စေသည်ရှိရာ router ကို setting များကိုစာမျက်နှာပေါ်တွင်ကတွေ့နိုင်ပါသည်) နှင့် password ကို။
တစ်ဦးက Windows 10 မှာဝှက်ထားသော Wi-Fi ကွန်ယက်နဲ့အစောပိုင်းမူကွဲချိတ်ဆက်ခြင်း
Windows 10 ကိုတစ်ဦးက hidden ကို Wi-Fi ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ရန်အောက်ပါအဆင့်တွေကိုလိုအပ်ပါတယ်:
ရရှိနိုင်ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်များစာရင်းထဲတွင် (များသောအားဖြင့်စာရင်း၏အောက်ဆုံးမှာ) "က Hidden ကွန်ယက်ကို '' ကိုရွေးချယ်ပါ။
ကွန်ရက်အမည် (SSID သို့) ရိုက်ထည့်ပါ
Wi-Fi ကို (ကွန်ယက်လုံခြုံရေးကီး) အတွက် password ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
အရာအားလုံးမှန်ကန်စွာထဲသို့ဝင်လျှင်, တိုတောင်းတဲ့အချိန်ပြီးနောက်သင်တစ်ဦးကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မည်။ အောက်ပါဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်းကိုလည်း Windows 10 ကိုသင့်လျော်သည်။
Windows7နဲ့ Windows 8 ကိုခြေလှမ်းတစ်ခုက hidden ကွန်ယက်ကိုချိတ်ဆက်ရန်မတူညီတဲ့ကြည့်ရှုမည်:
"အသစ်တခုကွန်နက်ရှင်သို့မဟုတ်ကွန်ရက်တက်သတ်မှတ်မည်။ " ကိုနှိပ်ပါ
ကို Select လုပ်ပါ "ကို manually ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ တစ်ဦးက hidden ကွန်ယက်ကိုချိတ်ဆက်ရန်, ဒါမှမဟုတ်အသစ်တခုကွန်ယက်ကိုပရိုဖိုင်းကိုဖန်တီးပါ။ "
ကွန်ရက်အမည် (SSID သို့) လုံခြုံရေးအမျိုးအစား (များသောအားဖြင့် WPA2-ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ) နှင့်လုံခြုံရေးကီး (ကွန်ယက်ကနေစကားဝှက်) ရိုက်ထည့်ပါ။ "ဟုအဆိုပါကွန်ယက်ကိုထုတ်လွှင့်ထုတ်လုပ်ရန်မဟုတ်ပါလျှင်ပင်ချိတ်ဆက်ပါ" နှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ Check "Next ကို။ "
သင်ဤလမ်းအတွက်ချိတ်ဆက်မှုကိုမနိုင်လျှင်, အမည်တူ (ကပုန်းအောင်းရှေ့တော်၌ထိုလက်ပ်တော့သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာသိမ်းဆည်းထားသောတဦးတည်း) ဖြင့်သိမ်းဆည်း Wi-Fi ကွန်ယက်ကိုဖယ်ရှား: သတိပြုပါ။ ဒီလက်စွဲတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်ပါဘူးလုပ်နည်း: ကွန်ယက် settings ကိုဒီကွန်ပျူတာထဲတွင်သိမ်းဆည်းကွန်ယက်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းမပေးပါဘူး။
အန်းဒရွိုက်အပေါ်တစ်ဦးက hidden SSID သို့နှင့်အတူကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုချိတ်ဆက်ရန်အောက်ပါပြုပါ:
Wi-Fi ကို - Settings ကိုသွားပါ။
သည် "မီနူး" ကိုနှိပ်ပါနှင့် "ကွန်ယက် Add" ကိုရွေးချယ်ပါ။
ကွန်ရက်အမည် (SSID သို့) ရိုက်ထည့်ပါ, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏လယ်ပြင်တွင်စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းအမျိုးအစားကိုသတ်မှတ် (အများအားဖြင့် - ကို WPA / WPA2 PSK) ။
စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ပါနဲ့ click နှိပ် "Save ။ "
အဆိုပါဆက်တင်များကိုသိမ်းဆည်းပြီးနောက်သူကအကွာအဝေး၌တည်ရှိ၏လျှင်က Android ပေါ်မှာသင့်ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုတစ်ဦးက hidden ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ရပါမယ်, နှင့် parameters များကိုမှန်ကန်သောဖြစ်ကြသည်။
iPhone နှင့် iPad တစ်ခုက hidden Wi-Fi ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ခြင်း
iOS အတွက် (iPhone နှင့် iPad) အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း:
က "ကို Select လုပ်ပါကွန်ယက်" "အခြား။ " ကိုနှိပ်ပါအတွက်
ကို "လုံခြုံရေး" တွင်, ထိုနာမကိုအမှီ (SSID သို့) ကွန်ရက်က Enter, စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းအမျိုးအစားကိုရွေးပါ (များသောအားဖြင့် - WPA2), ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုစကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ရန်, "အသံစက်ပစ္စည်းချိတ်ဆက်ပါ။ " ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ထိပ်မှာညာဘက်။ ကအကွာအဝေးအတွက်ရရှိနိုင်ပါလျှင်အနာဂတ်၌တစ်ဦးက hidden ကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုကိုအလိုအလျောက်ထွက်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။
တစ်ဦး Macbook သို့မဟုတ် iMac သစ်နှင့်အတူတစ်ဦးက hidden ကွန်ယက်ကိုချိတ်ဆက်ရန်:
ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုအိုင်ကွန်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါနှင့်၏အောက်ခြေတွင်မီနူးကို item ကို select "အခြားကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ပါ။ "
ကို "လုံခြုံရေး" တွင်ကွန်ယက်၏အမည်ကိုရိုက်ထည့်ပါ, ခွင့်ပြုချက်အမျိုးအစား (များသောအားဖြင့် WPA / WPA2 ကိုယ်ပိုင်) ကိုသတ်မှတ်, သင့် password ကိုရိုက်ထည့်ပါနှင့် "Connect ကို" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
အနာဂတျမှာ, ကွန်ယက်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ကကွန်နက်ရှင် SSID သို့ထုတ်လွှင့်၏မရှိခြင်းရှိနေသော်လည်းအလိုအလျှောက်လုပ်လိမ့်မည်။
မျှော်လင့်ပစ္စည်းအတော်လေးပြည့်စုံထွက်လှည့်။ ဒါကြောင့်မှတ်ချက်များအတွက်သူတို့ကိုဖြေဆိုရန်အဆင်သင့်, မဆိုမေးခွန်းများကိုခဲ့ကြသည်လျှင်။
ဗီဒီယို Watch: 2019 Myanmar Gospel Movie Clip 1 ဘသရဖရရတ အစသရက မညသ ခငခနရမည နညလမ (စက်တင်ဘာလ 2019).